အာရွန်ရမ်ဒေးလ် ကို ဝေဖန်နေကြတဲ့ အာဆင်နယ် ပရိသတ်အချို့ အပေါ် သတင်းစကားပါးလိုက်တဲ့ အာတီတာ…. – Sport Gaber
အာရွန်ရမ်ဒေးလ် ကို ဝေဖန်နေကြတဲ့ အာဆင်နယ် ပရိသတ်အချို့ အပေါ် သတင်းစကားပါးလိုက်တဲ့ အာတီတာ….
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် ဂိုးသမား အာရွန်ရမ်ဒေးလ် ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာတော့မယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် လာပြီးနောက် ပရိသတ်အချို့ဟာ ကစားသမားရဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ အကောင့်မှာ သွားရောက် ဆဲဆို ပြစ်တင် ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ရမ်ဒေးလ် ဟာ သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်မှာ comment box ကို limit လုပ် ခဲ့ရပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ အာတီတာ က ချဲလ်ဆီး အသင်း နဲ့ ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ ရမ်ဒေးလ် ဘက်က ကာကွယ် ပြောကြား လိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ရမ်ဒေးလ် ကို ချစ်ခင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
အာတီတာ က ” ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ၊ ခံယူချက် ၊ စရိုက် လက္ခဏာ ကို သဘောကျသွားကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ၊ သူ့မှာ ဂိုးသမား တစ်ဦး ရှိသင့်တဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတွေ အားလုံး ရှိပါတယ် ၊ အသင်းအတွက်လည်း အများကြီး လုပ်ပေးနိုင်မယ့်သူပါ ။ ”
” သူ့ကို အချိန် အနည်းငယ်တော့ ပေးရမယ် ထင်ပါတယ် ၊ သူက အလားအလာကောင်းတွေ ရှိတဲ့ လူငယ် ဂိုးသမား တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
ရမ်ဒေးလ် တစ်ယောက် ချဲလ်ဆီး နဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်မှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အာတီတာ က ” ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့် ရပါဦးမယ် ၊ စာချုပ်စာတမ်း ကိစ္စတွေ ပြီးပြတ်ဖို့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ် ၊ သူ ဆေးစစ်မှုလည်း ခံယူ ပြီးပါပြီ ၊ ရှက်ဖီး အသင်းနဲ့ မပြီးပြတ်သေးတာတွေ ကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့်ပါ ၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် စောင့်ဆိုင်းရပါမယ် ။ ”
နံပါတ် တစ် နေရာကို အပြိုင်လုကြမယ့် ဂိုးသမားကောင်း နှစ်ဦး ရှိနေတဲ့ အပေါ် အာတီတာ က ” ဒါက ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ အရာပါပဲ၊ အရင်ကတည်းက ဒီလိုပဲ ရည်ရွယ် ထားခဲ့တာပါ ၊ ဘာအသစ်အဆန်းမှ မဟုတ်ပါဘူး ။ ”
” နှစ်ယောက်စလုံးက မတူညီတဲ့ပရိုဖိုင် ၊ ကစားသမားဘဝ ဖြတ်သန်းမှု တွေနဲ့ပါ ၊ အာရွန်​က ကလပ် အသင်းမှာရော နိုင်ငံ အသင်းမှာပါ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ လူငယ် ဂိုးသမား တစ်ဦးပါ ။ ”
” သူ ရောက်လာတာက ပြိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ အရာပါပဲ ၊ နေရာတိုင်းမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိနေအောင် ဖန်တီး သွားမှာပါ ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပေါ့ဗျာ ၊ ကျွန်တော်တို့ ဂိုးသမား လိုအပ် နေခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါကြောင့် အာရွန် ကို အဓိ​က ပစ်မှတ် အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့တာပါ ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။